जो भिटामिन माछा तेल मा? माछा तेल: लाभ र हानि
प्रत्येक बच्चाको आमा वा हजुरआमा कम्तिमा एक spoonful पिउन आग्रह किनभने माछा तेल को स्वाद र सुगन्ध, बाल्यकाल देखि हामीलाई परिचित छन्। Peculiar गन्ध र पैसा को स्वाद बच्चाहरु को लागि वास्तविक सजाय थियो, तर आमाबाबुले दृढ बच्चा को विकास र स्वास्थ्य यसको उपयोगिता विश्वास। मा मामला यो छ कि छैन भनेर? माछा तेल को मानव स्वास्थ्य कस्तो राम्रो (वा, त्यसको विपरीत, हानि) ल्याउन सक्छ? जो भिटामिन माछा तेल मा एक बच्चाको विकास सकारात्मक प्रभाव छ? यसलाई प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ भन्दा, रूप त cloying स्वाद महसुस गर्न?
रोक्न र व्यवहार गर्न माछा तेल को रोगहरु पनि आधा शताब्दी पहिले Norwegians खपत। फार्मासिस्ट पत्रुस Moller पहिलो यसको उपयोगिता बारे कुरा। नार्वेजियन जनसंख्या मानव स्वास्थ्य मा लाभकारी प्रभाव छ कि एक माछा तेल पूरक विचार थियो। समय, माछा तेल को प्रभाव जानकारी संसारभरि छरिएका।
गुणस्तर उपकरण को विशिष्ट स्वाद सङ्केत गर्दै धेरै साधारण भिटामिन प्रयोग, तर अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले र डाक्टर को नर्डिक देशहरुको मान्छे धेरै यस्ता myocardial infarction वा atherosclerosis रूपमा रोगहरु बाट पीडित कम सम्भावना प्रमाणित गरेका छन्। यो कारणले गर्दा तिनीहरूले नियमित जो polyunsaturated बोसो समावेश, समुद्री भोजन खान भनेर, ओमेगा3तथ्यलाई छ। आज, माछा तेल मानव स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रयोग गरिएको छ।
उत्पादन को गुणवत्ता वातावरण मा निर्भर गर्दछ। दुर्भाग्यवश, हामी अक्सर नकारात्मक बाटो असर पर्यावरण प्रदूषण संग सामना गर्दै छन्, माछा तेल कुन गुण छ। उत्पादन र क्षति को लाभ लामो वैज्ञानिकहरू द्वारा अध्ययन गरिएको छ, र ती सबै उत्पादन गुण माछा को कलेजो मा सञ्चय जुन औद्योगिक बिष, प्रभावित छन् भनेर राय एकताबद्ध छन्।
माछा तेल। उत्पादन
बोसो माछा जो विशिष्ट स्वाद र सुगन्ध छ, एक तेल, स्पष्ट तरल फिक्का yellowish थियो छ। चाहे को प्रश्नको जवाफ माछा पाइने एक भिटामिन बोसो शरीर मा एक सकारात्मक प्रभाव छ, हामी भन्न सक्छौं कि उत्पादन polivitaminizirovan, संतृप्त एसिड, खनिज र अन्य लाभदायी पदार्थ। माछा तेल प्रयोग को निर्माण कड माछा मात्र कलेजो लागि। मिति, उत्पादन को उत्पादकहरु यो तरल वा दाना को रूप मा जारी। विशेष ध्यान chewable ट्याब्लेटको को रूप मा माछा तेल "सुन जस्तो माछा" दिइएको छ।
उत्पादन एक ग्राम कारणले भिटामिन ए (retinol) को यो उच्च दर गर्न भिटामिन ए को 350 भन्दा बढी IU समावेश अनुहार र शरीर छाला, को श्लेम लाग्एको ऊतक को खोल लागि राम्रो को सुधार योगदान पुग्छ। माछा तेल (भिटामिन ए, विशेष) दृष्टि मा लाभकारी प्रभाव छ, यो राम्रो दृष्टि गर्न twilight मा, मद्दत गर्छ रंग अन्धो विकास रोक्छ। कारण भिटामिन को कमी एक आफ्नो दृश्य अपील कपाल र नङ, छाला र श्लेम लाग्एको ऊतक ड्राई गुमाउन। खनिज, क्याल्सियम र राम्रो शरीर मा भित्र पस्नु गर्न फस्फोरस मद्दत गर्छ जो भिटामिन डी, पनि माछा तेल मा समावेश गरिएको छ। भिटामिन ई बाल nourishes र circulatory सिस्टम स्थिर। क्याल्सियम, बर्नर, फलाम, आयोडिन, मैंगनीज, क्लोरिन: भिटामिन उत्पादन बाहेक पनि अन्य खनिज समावेश गर्दछ।
बोसो ओमेगा 3
Polyunsaturated एसिड ओमेगा-3 prostaglandins समावेश गर्दछ। हाल समर्थन र प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण, विरोधी-भडकाऊ प्रभाव बलियो, लड्न र शरीर बोसो अवशोषित गर्छ। तिनीहरूले रक्त नली dilate र घनास्त्रता रोक्न रूपमा Prostaglandins, atherosclerosis को prophylaxis लागि प्रयोग गरिन्छ।
राम्रो मुड प्रदान गर्दछ, आक्रमण, irritability, निराशा र तनाव विरुद्ध लड्न मद्दत गर्छ जो सकारात्मक दबाइ को serotonin उत्पादन प्रभाव, को फलस्वरूप। उत्पादन सक्रिय शरीरमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव छ रक्सी, को प्रभाव कम गर्न मद्दत छ। माछा तेल - राम्रो रोकथाम स्मृति हानि को र पागलपन।
माछा तेल मा निहित भिटामिन, मानव शरीर को राज्य को लागि राम्रो हो। उत्पादन हृदय रोग विरुद्ध लडाई को रोकथाम लागि प्रयोग गरिन्छ। धेरै चिकित्सा अध्ययन ओमेगा3वृद्धि र मानव विकास एक लाभदायक प्रभाव छ भनेर पुष्टि गरेका छन्। तिनीहरूले पनि व्यवहार स्वास्थ्य र योगदान संज्ञानात्मक कार्य मस्तिष्क को।
विशेष, माछा तेल, फिक्री र निराशा, कम रक्तचाप संग संघर्ष तनाव को नकारात्मक प्रभाव लड्न। साथै, psoriasis र छाला सूक्खापना को उपचार मा प्रयोग दबाइ। माछा तेल लिएर तपाईं हृदय रोग, पुरानो रोग, गठिया को संभावना कम। माछा तेल मा भिटामिन को जीव को आवश्यकता संतुष्ट कि आधारमा, उत्पादन धेरै रोगहरु को घटना सुधार समग्र स्वास्थ्य रोक्छ र सम्पूर्ण शरीर मा भडकाऊ प्रक्रिया रोक्छ। साथै, माछा तेल जसको मूल्य अन्य लागूपदार्थको तुलनामा धेरै कम सक्रिय छ, मोटोपना लड्न, triglyceride स्तर lowering र लागि जिम्मेवार छन् भन्ने जीन को काम सक्रिय मद्दत गर्छ बोसो जल। उदाहरणका लागि, उच्च गुणस्तरीय तेल को 100 दाना बारे 900 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। जार माछा तेल (100 एमएल) औषधि पसल मा 200 rubles खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
माछा तेल साधारण खाना थपिएको, प्रयोगको लागि निर्देशनहरू पालन आवश्यकता एक दबाइ छैन। उत्पादन rickets को उपचार, atherosclerosis लागि रूपमा थप लागूपदार्थ, thrombophlebitis, इन्फ्लूएंजा, सर्दी र HIA बारम्बार घटना, प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। आफ्नो दैनिक आहार मा माछा तेल सहित, तपाईं अन्ततः सुक्खा कपाल, नङ र छाला समस्या को, दृष्टि समस्या देखि छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मुड, मानसिक स्थिति र स्मृति पनि माछा तेल मदत गर्नेछ सुधार। भिटामिन तयारी सकारात्मक हड्डी र दाँत को वृद्धि प्रभावित, बल्न र घाउ, वृद्धि को तीव्र निको प्रचार र प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन।
cosmetology मा प्रयोग
माछा तेल - प्राकृतिक पशु तेल सक्रिय कस्मेटिक उद्देश्यका मा प्रयोग गरिन्छ जो। यो माछा तेल फेला एक भिटामिन एक प्रमुख कार्य कार्य कि टिप्पण लायक छ। र तिनीहरूलाई यो पहिले छाला बुढ्यौली रोक्न उनको wilting प्रतिरोध, बाहिर झुर्रियाँ चिकना र मुखासे र उमेर स्थलहरू को यो खाली पर्याप्त छ। माछा तेल घर मास्क मा, साथै पसलमा मिडिया रूपमा प्रयोग गरिन्छ। घर उपयुक्त दानाको मा मास्क तयार। एकदम छाला को अवस्था सुधार गर्न, एक पटक एक दिन छाला मा माछा तेल राख्न र 15 मिनेट पछि न्यानो पानी र अतिरिक्त बोसो संग कुल्ला पर्याप्त छ।
माछा तेल र वजन
माछा तेल शरीर बोसो बाल्न र मोटोपना लड्न मद्दत गर्छ। यदि महिला 25% भन्दा बोसो, पुरुषहरु 15% भन्दा हुँदा, एक महिना मा दबाइ को नियमित प्रयोग एकदम स्वास्थ्य र वजन हानि सुधार हुनेछ। तर तपाईँ पहिला आफ्नो शरीर मा बोसो को प्रतिशत जान्नु आवश्यक छ। यसको विपरीत, सूर्यमुखी तेल, माछा तेल comprises polyunsaturated फैटी एसिड ओमेगा-3, इन्धन रूपमा शरीर द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो। पछि linoleic, docosahexaenoic र समावेश यी यौगिकों ठूलो क्षमता zhiroszhigayuschim छ eicosapentaenoic एसिड। चिकित्सकहरु यी एसिड यसरी आफ्नो भण्डारणको लागि स्पेस कम, बोसो नष्ट गर्न मद्दत गर्ने निष्कर्षमा छन्। मूल्य जो प्रत्येक ग्राहक को लागि स्वीकार्य छ कड लिवर तेल, अतिरिक्त वजन विरुद्ध लड्न एक उत्कृष्ट उपकरण छ। उहाँले जीन बोसो जम्मा गर्न "बन्द" र बोसो-जल जीन क्रियाशीलता।
2007 मा, अमेरिका माछा तेल बोसो को टूटने बढावा कसरी एक अध्ययन प्रकाशित गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले दबाइ स्वतन्त्र रगत चीनी स्तर र ट्राइग्लिसराइड्स कम गर्न सक्षम छ भन्ने पुष्टि गरेका छन्। यसबाहेक, माछा तेल बिस्तारै शरीरको वजन कम गर्न मद्दत गर्छ। रक्त शर्करा को एक उच्च स्तर मा बोसो हानि रोक्छ जो इन्सुलिन, को उत्पादन हुन्छ।
बच्चाहरु को लागि माछा तेल
माछा तेल को विशाल लाभ, विकासशील र बढ्दै बच्चा मा छ आमाबाबुले बच्चाहरु खाना को आहार मा समावेश गर्न प्रयास त। एक उत्पादन छनौट गर्दा केही nuances ध्यान गर्नुपर्छ मदत गर्न तपाईं सबै भन्दा राम्रो चयन बच्चाहरु को लागि माछा तेल। लागूऔषधको गुणस्तर गुणस्तर र माछा को प्रकार मा निर्भर गर्दछ।
माछा तेल उत्पादन को सबै भन्दा साधारण विधि यसलाई कड माछा को कलेजो बाट निकाल्न छ। तर दुर्भाग्य, कारण वातावरण र पानी विपत्तिजनक प्रदूषण गर्न कलेजो अक्सर छैन धेरै उच्च गुणवत्ता कारण toxins को एक ठूलो संख्या को संग्रह छ। बोसो कड, को पाठ्यक्रम, भिटामिन समावेश गर्छ, तर त्यहाँ धेरै सानो polyunsaturated एसिड छ।
राम्रो र छोराछोरीलाई छलफल बोसो समुद्र माछा देखि निकाले लागि थप उपयुक्त। माछा तेल लाभ र यो बनेको छ, जसबाट माछा प्रजाति सिधै निर्भर छन् कि हानि, यो धेरै ध्यान दिएर चयन गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, शार्क अक्सर carrion खान्छन्, र यो adversely मासु र बोसो गुणस्तर असर गर्छ।
जार मा तरल माछा तेल, जो को स्वाद बाल्यकाल देखि वृद्ध पुस्ता गर्न परिचित छ, साँच्चै बच्चाहरु जस्तै, त्यसैले लिएर छैन यो एक वास्तविक चुनौती बन्नेछ। यो दबाइ को स्वाद neutralize गर्न, आफ्ना छोराछोरीलाई कड लिवर तेल दाना दिन राम्रो छ। छोराछोरीको लागि chewable ट्याब्लेट उपलब्ध छ जो माछा तेल "सुनको माछा", - त्यहाँ बच्चाहरु संग धेरै लोकप्रिय छ कि एउटा रुप हो।
माछा तेल एक दबाइ भएकोले, तपाईं contraindications विशेष ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसैले, यो र gallstone र मृगौला पत्थर रोग, थायरयड ग्रंथि को विकार को उपस्थिति मा लिन सिफारिस गरिएको छैन। दबाइ लिन छैन भने hypervitaminosis, घटकहरुलाई उच्च संवेदनशीलता वा माछा तेल एलर्जी।
पहिले, कड लिवर तेल मात्र तरल रूप मा उपलब्ध थियो। अब प्रश्न कड लिवर तेल कसरी पिउन छ, अन्य तरिकामा हल छ। बिक्री मा बुलबुले वा दाना को रूप मा एक दबाइ छ। दिन मा 15 मिलीग्राम को बारे मा5दाना लिनुपर्छ। माछा तेल लगातार लिएको यदि देखिने परिणाम प्रदान गर्दछ।
छोराछोरीलाई लागि दैनिक दर वयस्कहरूको लागि भन्दा कम छ, र माछा तेल को एक वर्ष मुनिका बच्चाहरु सकिन्छ मात्र चिकित्सकको सल्लाह मा। अत्यधिक नियमहरु जटिलताहरुलाई एक नम्बर खतरामा, त्यसैले तपाईं निर्देशन अनुसार लागूपदार्थ लिन आवश्यक छ।
बाह्य प्रयोगको लागि दाना साथै, त्यहाँ पनि विशेष तेल र लोशन बाह्य आवेदन साथै माछा तेल लागि घाउ र बल्न को उपचार को लागि राम्रो छ। यस प्रकारको सबैभन्दा लोकप्रिय दबाइ - "Livian" स्प्रे।
यो तनाव आवश्यक फेरि त्यो माछा तेल छ - यो सामान्य प्रतिरक्षा, विभिन्न रोगहरु को रोकथाम, छोराछोरीको विकास र वृद्धि को सक्रियता अभिवृद्धि गर्न एक अद्भुत र किफायती तरिका हो। तपाईं यस चिकित्सा लिएर सुरु गर्नु अघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् गर्न नबिर्सनुहोला।
किन कड लिवर तेल पिउन? किन खेलाडीहरूलाई कड लिवर तेल पिउन के? म माछा तेल दाना पिउन किन चाहिन्छ?
BAA "स्टेला": समीक्षा, सङ्केत गर्छ, contraindications र साइड इफेक्ट
भिटामिन जटिल "Evalar" ( "छाला, कपाल र नङ लागि"): प्रयोगको लागि समीक्षा, संरचना र निर्देशन
पर्यावरण गोलियां रास्पबेरी: सुविधा को समीक्षा
बालबालिकाको लागि जीवविज्ञानी सक्रिय थप "ImmunoMishki": प्रयोगका लागि निर्देशनहरू
इन्टेबेशन ट्यूब (एंडोटेक्टल ट्यूब): प्रकार, आकार, उद्देश्य। ट्रेचेल इन्टेबेशन किट
पत्थर चिकित्सा - तातो ढुङ्गा मालिश। पत्थर उपचार को लागि पत्थर
को फ्लोचार्ट: कार्यक्रम, वस्तुहरू, घटक, निर्माण
ड्राफ्टहरूको लागि कसरी मार्गदर्शक छनौट गर्नुहोस्
'Utrozhestan': प्रयोगको लागि समीक्षा र सिफारिसहरू
कति रूस मा एक ओटो मिस्त्री कमाता?
परी कथा "जूत्ता मा Puss": सारांश
बेल - यो के हो? जहाज घण्टी
जाल चेतावनी "कमी": निर्देशन, समीक्षा